Jadwalka Jadwalka Tooska ah ee 2021 Alibaba
Nolosha Waqtiga Tooska ah Waxay Marti galineysaa QR Code si toos ah Alibaba 14:00 pm, Maarso 4-teeda (CST) Eco Vent Pro Plus Energy Saving Ventilation iyo PPE Products Production Cleanroom Service Tom, Andrew https: //activity.ali ...
Markay tahay nashqadeynta qol cusub oo nadaafadeed, tan ugu weyn, iyo go'aanka ugu horeeya ee aad qaadan laheyd ayaa ah in qolkaaga nadaafaddu uu noqon doono mid qaab dhismeed ah ama dhaqan ahaan loo dhisay. Waxaa jira faa'iidooyin iyo xaddidaad kasta oo ka mid ah xulashooyinkaas, wayna adkaan kartaa in laga hortago ...
Sifeeyaha hawadu runtii ma shaqeeyaan?
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay xasaasiyad. Waxaa laga yaabaa inaad heshay hal ogeysiis badan oo riixid ah oo ku saabsan tayada hawada aaggaaga. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay inay kaa caawin karto kahortaga faafitaanka COVID-19. Sababta aad doonto ha noqotee, waxaad ka fikireysaa inaad hesho nadiifiye hawo, laakiin qoto dheer, ma caawin kartid ...
Tilmaamaha Ilaalinta Jiilaalka AHU Gariiradda
Biyaha ayaa loo isticmaalay in lagu qaboojiyo laguna kululeeyo hawo kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka xirmooyinka tan iyo bilowgii kuleylka iyo qaboojinta. Qaboojinta dareeraha iyo waxyeelada gariiradda ee natiijada ayaa sidoo kale soo jiray isla waqti isku mid ah. Waa dhibaato nidaamsan oo ...
8 Waa Inuu Ka Fogaadaa Khaladaadka Rakibaadda Hawo Qolka Nadiifinta
Nidaamka hawo-qaadashadu waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka u ah Naqshadaynta Nadaafadda iyo hannaanka dhismaha. Nidaamka rakibaadda nidaamka wuxuu saameyn toos ah ku leeyahay jawiga sheybaarka iyo qalabka qolka nadiifinta hawlgalkiisa iyo dayactirkiisa. Xad dhaaf ...
Su'aalaha Sheybaarada PCR-yada ee La Isweydiiyo (Qeybta B)
Waqtigan xaadirka ah Imtixaannada hadda jira ee 'Covid-19' ee dhammaan warbixinnada ay ka imanayaan waxay adeegsanayaan PCR. Korodhka ballaaran ee imtixaannada PCR ayaa ka dhigaya shaybaarka PCR mawduuc kulul ee warshadaha nadaafadda. Airwoods-ka, waxaan sidoo kale ku aragnaa kororka weyn ee shaybaarka PCR inq ...
Su'aalaha Shaybaarada PCR-yada ee La Isweydiiyo (Qeybta A)
Haddii soosaarida tallaalku ay tahay ciyaarta dheer ee ladagaalanka cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus', tijaabinta wax ku oolka ah ayaa ah ciyaarta gaaban ee ay rugaha caafimaadku iyo saraakiisha caafimaadka bulshada ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan cudurada faafa. Iyada oo qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah dib loo furay bakhaarradii iyo servi ...
Maxay yihiin waxyaabaha muhiimka ah ee naqshadeynta qolka nadiifka ah?
Musqulaha waxaa loo isticmaalaa ficil ahaan warshad kasta oo qaybaha yaryar ay faragelin ku sameyn karaan habka wax soo saarka. Iyada oo si dhakhso leh loo horumarinayo dhaqaalaha bulshada, gaar ahaan tijaabooyinka sayniska iyo soosaarida tikniyoolajiyadda sare ...
Sida loogu shubi karo alaabada qolka nadiifinta weelka xamuulka
Waxay ahayd Julaay, macmiilku wuxuu noo soo diray qandaraaska, si aan ugu soo iibsano albaabbada iyo aluminium-yada xafiisyadooda soo socda iyo mashaariicda qolka qaboojinta. Xafiiska, waxay u doorteen muraayad maaddada magnesium dhalada ah, dhumucdiisuna tahay 50mm. Maadadu waa mid qiimo jaban, dab ...
Dhacdooyinka 2020-2021 HVAC
Dhacdooyinka HVAC waxaa lagu fuliyaa meelo kala duwan oo adduunka ah si loogu dhiirrigeliyo shirarka iibiyeyaasha iyo macaamiisha iyo sidoo kale in lagu soo bandhigo tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee kuleylka, hawo-qaboojinta, qaboojinta iyo qaboojinta. Dhacdadii weyneyd ee la fiirinayay ...
Dos iyo Dont for Test Molecular
Hababka lagu ogaanayo molikalku waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan tiro badan oo ah nucleic acid iyada oo loo marayo kordhinta tirada raadadka laga helay shay-baarka. In kasta oo tani faa'iido u leedahay awood u helidda ogaanshaha xasaasiga ah, haddana waxay soo bandhigaysaa ...
Tilmaamaha Naqshadaynta Nidaamka Xafiiska HVAC
Cudurka faafa ee adduunka awgeed, dadku aad iyo aad ayey uga taxadaraan dhismaha tayada hawada. Hawada cusub & caafimaadku waxay yareyn kartaa halista ah inuu ku dhaco cudur iyo ka-tallaalidda fayraska munaasabado badan oo dadweyne ah. Si lagaaga caawiyo inaad fahanto syste hawo wanaagsan ...
Saynisyahannadu waxay ku booriyeen WHO inay dib u eegis ku sameyso xiriirka ka dhexeeya huurka iyo caafimaadka neefsashada
Codsi cusub wuxuu ugu baaqayaa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) inuu qaado tallaabo deg deg ah oo go'aan qaadasho ah si loo sameeyo hagitaan caalami ah oo ku saabsan tayada hawada gudaha, iyadoo talobixin cad laga helayo xadka ugu hooseeya ee qoyaanka hawada ee dhismayaasha dadweynaha. Tallaabadan muhiimka ah waxay yareyn doontaa t ...
Shiinaha ayaa khubaro caafimaad u dirtay Itoobiya si ay ula dagaallamaan Coronavirus
Koox khubaro caafimaad oo ka hortaga cudurrada faafa ee Shiinaha ayaa maanta soo gaadhay magaalada Addis Ababa si ay ula wadaagaan khibrada una taageeraan dadaalka ay Itoobiya ugu jirto joojinta faafitaanka COVID-19. Kooxda ayaa soo dhaweysay 12 khubaro caafimaad ah oo ka qeyb qaadan doona la dagaalanka faafitaanka cudurka coronavirus muddo labo todobaad ah ...
Naqshadaynta Nadaafadda ee 10 Tallaabo oo Fudud
"Easy" ma noqon karto eray maskaxda ku soo dhacaya si loo dejiyo jawi xasaasi ah. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan inaadan soo saari karin naqshad nadiif ah oo nadiif ah adoo ku xallinaya arrimaha taxanaha macquul ah. Maqaalkani wuxuu daboolayaa tallaabo kasta oo muhiim ah, oo hoos u dhigaysa adeegsiga gaarka ah ee ku habboon ...
Sida Loo Suuq Geeyo HVAC Inta Lagu Jiro Faafida Coronavirus
Farriintu waa inay diiradda saartaa tallaabooyinka caafimaadka, iska ilaali xad-dhaafka Ku dar suuq geyn liiska go'aannada ganacsiga ee caadiga ah ee sii murganaya iyada oo tirada kiisaska coronavirus-ku ay sii kordhayaan iyo falcelintuna ay sii kordheyso. Qandaraaslayaashu waxay u baahan yihiin inay go aansadaan inta ...
Ku Hagaya Macaamiisha Tayada Hawada Gudaha iyo Tabaha Lagu Joogtaynayo IAQ
In ka badan sidii hore, macaamiisha waxay daryeelaan tayada hawadooda Cudurada neef mareenka ku haya cinwaannada iyo dadka la il daran neefta iyo xasaasiyadda, tayada hawada aan ku neefsanno guryaheenna iyo hareeraha gudaha weligood muhiim ugama ahayn macaamiisha ...
Soo-saare Kasta Ma Noqon Karaa Soo-Saaraha Maaskarada Qalliinka?
Waa suurta gal in soo saaraha guud, sida warshada dharka, inuu noqdo soo saare maaskaro, laakiin waxaa jira caqabado badan oo laga gudbi karo. Sidoo kale maahan habsocod habeennimo, maxaa yeelay alaabooyinka waa inay oggolaadaan hay'ado badan iyo abaabul ...
Dhismaha Qolka Nadaafada Su'aalaha Badanaa
Maxay Tahay Sababta Loogu Caawinayo Dhismaha Qol Nadiif ah? Dhismaha qolka nadiifinta, sida dhisida xarun cusub, waxay u baahan tahay shaqaale aad u tiro badan, qaybo, qalab, iyo tixgelinta naqshadaha. Kordhinta qaybaha iyo kormeerka dhismaha ee xarun cusub maahan wax aad waligaa qaadan laheyd ...
Shuruudaha hawo qaadashada qaab dhismeedka casriga ah
Iyada oo si joogto ah loo horumariyo tiknoolajiyada hawo-qaadashada. Dadku waxay awoodaan inay xakameeyaan jawiga gudaha ee dhismaha waxayna abuuraan jawi wanaagsan oo gudaha ah. Si kastaba ha noqotee, Xaaladda yaraanta adduunka ee ...
Airwoods ayaa si guul leh looga muujiyay 2020 BUILDEXPO
Shirkii 3aad ee BUILDEXPO waxaa la qabtay 24 - 26 Febraayo 2020 waxaana lagu qabtay Hoolka Millennium Hall Addis Ababa, Ethiopia. Waxay ahayd meesha kaliya ee laga helo ilaha cusub, adeegyada iyo tikniyoolajiyadda adduunka oo dhan. Safiirada, wufuuda ganacsiga iyo wakiilo ka socda c ...
Kusoo dhawow AIRWOODS Booth ee BUILDEXPO 2020
Airwoods waxay ka socon doontaa BUILDEXPO seddexaad laga bilaabo 24 - 26 Febraayo (Isniinta, Tue, Wed), 2020 oo istaag No.125A, Millennium Hall Addis Ababa, Ethiopia. Markaad istaagto No.125A, wax mater ah oo aad tihid milkiile, qandaraasle ama la taliye, waxaad ka heli kartaa qalabka HVAC & nadaafadda la hagaajiyey ...
4 Inta badan Arimaha HVAC ee guud & Sida loo hagaajiyo
Dhibaatooyinka ka heysta mashiinkaaga waxay u horseedi kartaa hoos u dhac ku yimaada waxqabadka iyo waxtarka iyo haddii aan la ogaan muddo dheer, xitaa waxay sababi kartaa arrimo caafimaad. Xaaladaha badankood, sababaha cilladan waa arrimo fudud. Laakiin kuwa aan ku tababbaran HVAC ...
Sidee Chiller, Tower-ka Qaboojinta iyo Unugga Qabashada Hawada ay u wada shaqeeyaan
Sidee Chiller, Cooling Tower iyo Unuga Qabashada Hawada u wada shaqeeyaan si ay u siiyaan qaboojiye (HVAC) dhisme. Maqaalkani waxaan ku dabooli doonnaa mawduucan si aan u fahamno aasaasiga dhirta dhexe ee HVAC. Sidee munaarad qaboojiye iyo AHU u wada shaqeeyaan Nidaamka ugu weyn componen ...
Fahmitaanka Soo Celinta Tamarta ee Sarriflayaasha Kuleylka Rotary
Waxyaabaha farsamada ee muhiimka ah ee saameeya waxtarka tamarta Fahamka soo kabashada tamarta ee kuleylka wareega - Qodobada muhiimka ah ee farsamada ee saameeya waxtarka tamarta Nidaamyada soo kabashada ayaa loo qeybin karaa laba qaybood iyadoo lagu saleynayo xuduudaha kuleylka ee nidaamka: Nidaamyada soo kabashada tamarta ...
AHRI wuxuu sii daayaa Ogosto 2019 Xogta Shixnadaha iyo Qaboojinta Qalabka Mareykanka
Kuleylka biyaha kululeeyayaasha biyaha kululeeyaha shixnadaha Mareykanka ee kululeeyayaasha biyaha keydka gaaska ee bisha Sebtember 2019 ayaa kordhay .7 boqolkiiba, ilaa 330,910 unug, laga soo bilaabo 328,712 unug oo la diray bishii Sebtembar 2018. Rarista biyaha kululeeyaha keydka guryaha ee korantada ayaa kordhay 3.3 boqolkiiba Sebtember 2019 illaa 323, .. .
Airwoods waxay qandaraas kula jirtaa Mashruuca Qolka Nadiifinta ee Diyaaradda Ethiopian Airlines
Bishii Juun 18 2019, Airwoods waxay qandaraas la gashay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines, si ay qandaraas ugu siiso Mashruuca Dhismaha Qolka Nadiifinta ee ISO-8 ee Workshop Oxygen Bottle Overhaul Workshop. Airwoods waxay xiriir iskaashi la yeeleysaa Ethiopian Airlines, waxay si buuxda u cadeyneysaa Airwoods xirfaddeeda iyo comprehensiv ...
Suuqa Teknolojiyada Nadaafadda - Kobaca, Isbeddellada, iyo Saadaasha (2019 - 2024) Dulmarka Suuqa
by idaacadda Subaxnimo 19-06-06
Suuqa tikniyoolajiyadda nadaafadda waxaa lagu qiimeeyay USD 3.68 bilyan 2018 waxaana la filayaa inuu gaaro qiimaha USD 4.8 bilyan sanadka 2024, CAGR 5,1% mudada saadaasha (2019-2024). Waxaa kordhay baahida loo qabo alaabada la xaqiijiyay. Shahaadooyin tayo kala duwan, sida ISO chec ...
Qolka Nadiifka ah - Tixgalinta Caafimaadka iyo Badbaadada ee Nadaafadda
Heerarka Caalamiga ah waxay xoojineysaa Warshadaha Qolka Nadiifinta Casriga ah Heerka caalamiga ah, ISO 14644, wuxuu ku baahsan yahay tiknoolojiyad badan oo nadiif ah wuxuuna ku shaqeynayaa dalal badan. Adeegsiga tikniyoolajiyadda nadiifka ah waxay sahlaysaa xakamaynta wasakheynta hawada laakiin waxay kaloo qaadan kartaa waxyaabo kale ...
Sidee Goobta HVAC u Beddelaysaa
Muuqaalka aagga HVAC ayaa isbedelaya. Taasi waa fikrad si gaar ah uga muuqatay Bandhigga AHR ee 2019 ee Janaayo ee la soo dhaafay Atlanta, welina way soo noqnoqoneysaa bilooyin kadib. Maamulayaasha xarumaha wali waxay u baahan yihiin inay fahmaan waxa dhabta ah ee isbedelaya — iyo sida ay ula socon karaan si loo hubiyo dhismahooda ...
Tilmaamaha u hoggaansamida ee 2018 – Heerka ugu weyn ee keydinta tamarta taariikhda
Tilmaamaha cusub ee u hoggaansamida Waaxda Tamarta ee Mareykanka (DOE), oo lagu sifeeyay "heerka ugu weyn ee tamarta keydinta taariikhda," waxay si rasmi ah u saameyn doontaa warshadaha kuleylka iyo qaboojinta ganacsiga. Heerarka cusub, ee lagu dhawaaqay 2015, waxaa loo qorsheeyay inuu dhaqan galo Janaayo 1, 2018 oo la beddeli doono ...
Dhismaha Airwoods HVAC Waaxda Dusha Sare Xafiiska Cusub
Xafiiska cusub ee Airwoods HVAC ayaa laga dhisayaa Guangzhou Tiana Technology Park. Aagga dhismuhu waa qiyaastii 1000 mitir murabac, oo ay ku jiraan hoolka xafiiska, saddex qol oo kulan oo leh yar yar, dhexdhexaad iyo weyn, xafiiska agaasimaha guud, xafiiska xisaabaadka, xafiiska maareeyaha, qolka jir dhiska ...
Suuqa HVAC oo Taabanaya Rs 20,000 Crore Mark by FY16
MUMBAI: Suuqa kululeeyaha, hawo-siinta iyo qaboojiyaha Hindiya (HVAC) ayaa la filayaa inuu 30 boqolkiiba kor u kaco oo uu ka bato 20,000 crore labada sano ee soo socota, inta badan waxaa sabab u ah kororka howlaha dhismaha ee kaabayaasha iyo qeybaha guryaha. Qeybta HVAC waxay korortay in kabadan Rs 10,000 cro ...
Waxaan Daryeelnaa Tayadaada Qolka Nadiifta ah, Bixiye Xal u ah Qolka Nadiifka ah
Sharafta macmiilka nadiifinta mashruuca dhismaha gudaha wajiga 3aad - Kormeerka Xamuulka & rarka kahor fasaxa CNY. Guddi waa in tayada la hubiyaa, oo mid mid loo tirtiraa kahor inta aan la isdulsaarin. Guddi kasta waxaa loogu calaamadeeyay baaritaanka fudud; oo si nidaamsan loogu tuuray. Hubinta tirada, iyo liiska faahfaahsan ...
Airwoods waxay heshay Abaalmarinta ugu badnaan iibiyaha Giriigga
Shirka Giriigga Dhexe ee Hawada ee 2019 Greek iyo Munaasabadda Abaalmarinta Ganacsi ee Sannadlaha ah ayaa la qabtay Diseembar 5th, 2018 iyada oo hal-ku-dhigga tiknoolajiyadda 'Innovation Technology', mustaqbalka 'Sirdoonka Cilmiga'. Airwoods, oo ah ganacsade reer Giriig ah, ayaa kaqeybgalay xafladan waxaana lagu sharfay t ...
Global Air Hand Unit (AHU) Suuqa 2018 ee Soosaarayaasha, Gobollada, Nooca iyo Codsiga, Saadaasha illaa 2023
Suuqa Caalamiga ah ee Maareynta Hawada (AHU) wuxuu faahfaahinayaa faahfaahin dhameystiran oo kahadleysa qeexida wax soo saarka, nooca wax soo saarka, shirkadaha muhiimka ah, iyo dalabka. Warbixinta ayaa daboolaysa faahfaahin faa iido leh oo loo qoondeeyay iyada oo lagu saleynayo qeybta wax soo saarka hawada (ahu) ee gobolka wax soo saar, ciyaartoy waa weyn, iyo nooca wax soo saarka oo pr ...
HVAC R Expo ee BIG 5 Exhibition Dubai
Ku soo dhowow Booqo Booth-keena HVAC R Expo ee BIG 5 Exhibition Dubai Ma waxaad raadineysaa qaboojiyaha ugu dambeeya iyo alaabada hawo si ay ugu haboonaato mashaariicdaada? Kaalay si aad ula kulanto AIRWOODS & HOLTOP ee HVAC & R Expo ee Bandhigga BIG5, Dubai. Booth NO.Z4E138; Waqtiga: 26 illaa 29 Noofambar, 2018; A ...
Daaweynta Vocs - Waxaa loo aqoonsaday inay tahay ganacsi farsamo sare leh
Airwoods - Hogaanka Ilaalinta Deegaanka ee HOLTOP ee ilaalinta deegaanka ee warshadaha kala soocida batroolka lithium Airwoods - Beijing Holtop Environmental Protection Technology Co., Ltd. waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay shirkad tiknoolajiyad sare leh. Waxay ku lug leedahay berrinka ilaalinta deegaanka iyo kheyraadka r ...
Shahaadada HVAC ee Waxsoosaarka CRAA oo la siiyay HOLTOP AHU
CRAA, Shahaadada Waxsoosaarka HVAC waxaa lagu abaalmariyay Nooceena is haysta ee AHU Qabashada Hawada Hawada. Waxaa soo saaray ururka warshadaha qaboojinta iyo qaboojiyaha warshadaha iyada oo loo marayo baaritaan adag oo ku saabsan tayada wax soo saarka iyo waxqabadka. Shahaadada CRAA waa ujeedo, cadaalad iyo awood sheegasho ...
Shirkadaha HVAC Shiinaha Qaboojiyaha HVAC & R Carwada CRH2018
Bandhigga 29-aad ee Qaboojiyeyaasha Shiinaha ayaa lagu qabtay magaalada Beijing intii lagu guda jiray 9-kii Abriil ilaa 11-keedii, 2018. Shirkadaha Airwoods HVAC ayaa ka soo qeybgalay bandhigga bandhigga cusub ee ErP2018 ee u hoggaansanaanta kuleylka soo-saarka tamarta, hawo qaboojiyaha cusub ee cusub, unugyada maareynta hawada. ..
Airwoods HVAC Systems Solution waxay ku fiicnaataa raaxada tayada hawada gudaha
Waxaa qoray admin on 17-08-27
Airwoods had iyo jeer waxay isku dayaan sida ugu fiican inay soo bandhigaan wax ka qabashada xalka HVAC si loo xakameeyo jawiga gudaha si loogu raaxeeyo. Tayada hawada ee gudaha waa arrin muhiim u ah daryeelka aadanaha. Deegaanka gudihiisa ayaa laba ilaa shan jeer ka sun badan sunta bannaanka, sida ku xusan US Environmental Protect ...
HVAC Products Carwada Cusub ayaa la Aasaasay
Waxaa qoray admin on 17-07-01
War wanaagsan! Bishii Luulyo 2017, qolkeenna bandhigga cusub ayaa la aasaasay oo loo furay dadweynaha. Halkaas ayaa lagu soo bandhigayaa alaabada HVAC (Kuleylka Hawada Hawada): hawo ganacsi, qaboojiye warshadeed oo warshadeed, hawo bedelka kuleylka saxanka hawada, wareegga kuleylka wareega, codka ilaalinta deegaanka ...